ကျောင်းတွေမှာ တင်းကြပ်နေပါတယ် … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » ကျောင်းတွေမှာ တင်းကြပ်နေပါတယ် …
ကျောင်းတွေမှာ တင်းကြပ်နေပါတယ် …
Posted by မမလေး on Oct 14, 2010 in Education | 8 comments
အဝေးသင် ဒဂုံကျောင်းရော ၊ တာဝ ( သန်လျင် ) ကျောင်းရော အရမ်းကို တင်းကြပ်နေပါတယ်
အဝေးသင် ဒဂုံကျောင်းရော ၊ တာဝ ( သန်လျင် ) ကျောင်းရော အရမ်းကို တင်းကြပ်နေပါတယ် ။ ပုံမှန် တစ်ရက်ကို တစ်ချိန်လောက်ပေါ့နော် … စာရေးမပိုက်ဆံပေးပြိး ထိုးခိုင်းတဲ့သူကတော့ တစ်ရက်လောက် အတတ်ပြတာပေါ့ … အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့သူတွေကျတော့ ကျောင်းတတ်ပါတယ် … သုံး လေး ရက်ပေါ့ … လက်မှတ်ထိုးပြီး ဆရာမ မသိအောင် တိတ်တိတ်လေးပြန်ထွက်လို့လည်းရတယ် … ကိုယ်စားထိုးလည်း ဆရာမက မစစ်ဘူး … အားလုံးလည်း သိကြမှာပါ .
ဒီနှစ်က အဲ့ဒီလို မဟုတ်တော့ပါဘူး …ကိုယ်စားထိုးလို့လည်းမရတော့ဘူး … ပြန်ထွက်လို့လည်းမရတော့ဘူး … ဒဂုံက တစ်ယောက်ပြောတာတော့ မနက် ပထမတစ်ချိန် မှာတစ်ခါလူစစ်တယ် ။ ၁၂ နာရီ နောက်ဆုံး အချိန်မှာ တစ်ခါပြန်စစ်တယ် … နှစ်ချိန်လုံးမှာ မရှိပဲ တစ်ချိန်တည်းပဲ လက်မှတ်ရှိတယ်ဆို အဲ့ဒီနေ့ လက်မှတ်မရပါဘူးတဲ့ … တာဝမှာကတော့ လက်မှတ်ထိုးတယ် … တစ်ချိန်ပြီးရင် တစ်ခါ ခုံနံပါတ်အော်တယ် … လက်ညှိုးထောင်ရတယ် ။ လူစစ်တယ် … သူငယ်ချင်းအတွက် ခိုးပြီးထိုးရင် အဆင်မပြေတော့ပါဘူး … လက်မှတ်ထိုးပြီး ပြန်ထွက်သွားတဲ့သူတွေကတော့ လက်မှတ်မရတော့ဘူးပေါ့ … ခုဆိုရင် အနည်းဆုံး ခြောက်ရက် ၊ ၇ ရက်တော့ တတ်ရပါမယ်တဲ့ … အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ကျောင်းတတ်တဲ့သူတွေကတော့ အဆင်မပြေဘူးပေါ့ … ကျောင်းချိန် ကန်တင်းမှာ အရင်လို လူမများတော့ပဲ အတန်းတတ်နေရပါတယ်တဲ့ …
ပထမ အသုတ်တွေနဲ့ ဒဂုံမှာ ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး … ဒါကြောင့် မလို့ခုလို ကြပ်တာပါတဲ့ …
ဝန်ကြီးက မန်းလေးဂေဇက်မှာပါတဲ့ ပညာရေးအကြောင်းတွေဖတ်ပြီး ဒေါကီးသွားတယ်ဆိုလား။ ကျောင်းသားများစုပြီး နယ်စပ်က ဝစ်သောက်တန်းမြင့် ကားတစီးလောက် သီတင်းကျွတ်မှာ သိတတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် အရင်လိုနားလည်မှုနဲ့ စခန်းသွားလို့ ရနိုင်ပါကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဒီလောက် ကျောင်းသွား ကျောင်းပြန် ပင်ပန်းတာ.. အသွားအပြန် အနဲဆုံး ၃ နာရီနဲ့ ၄နာရီ အချိန်ပေးရတယ်.. တနေ့တာ အချိန်မှာ ၄နာရီကို ကားပေါ်မှာ အချိန်ဖြုန်းပြီး.. နေပူပူ ကျောင်းအမိုးအကာ သစ်ပင် ကျဲပါးတဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးထဲမှာ.. စာသင်ရတာ မလွယ်လှပါ။ အခုတော့ မသိဘူး အရင်က ဆို တာဝမှာ ကျောင်းတက်လို့ ထမင်းစားချိန် ဆိုင်တွေမှာ စားရင် တော်တော် စိတ်ညစ်ရတယ်.. အချက်အပြုတ်က ညံ.. ပိုက်ဆံနဲ့ မတန်အောင် ဈေးယူ အသားတွေကလည်း ချက်ထားတာ အနီရောင် ပျောက်လို့ ပန်းရောင် သန်းနေတယ် အဲဒီလို ထမင်းဟင်းတွေနဲ့ စားရတာ စိတ်ညစ်စရာ ချိုင့်နဲ့ သယ်ရတာလည်း ကားကျပ်တာနဲ့ စိတ်ပျက်.. အဖြစ်ကတော့ မလွယ်ပါဘူး.. နေ့တိုင်း အဲကွန်း ကောင်းတဲ့ ကား အကောင်းစားလေးနဲ့ ကျောင်းတက်နိင်ရင်တော့ အတိုင်းအထက်အလွန်ပေါ့လေ… F4 ရုပ်ရှင်ထဲက မင်းသားတွေလိုမျိုး.. ဟဲဟဲ..
တကယ်ပဲဝန်ကြီးက မန်းလေးဂေဇက် ဖတ်သလားဦးကြောင်ကြီးရေ……….
ဒါဆိုတော့ ပြောင် မျောက် တဲ့ ပညာရေးသတင်းတွေတင်ဖို့လိုအပ်နေပီ
အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစားတွေကတော့….ဘယ်လိုပဲ row call ကိုစစ်စစ် ပါ လစ်လို့ရလို့ လစ်နေသေးပါကြောင်း ။
ဟုတ်ပ.. အစတုန်းကဆို state ကျောင်းလိုတောင်လာလုပ်ပါသေးတယ်.. စာသင်ချိန် canteen မထိုင်ရပါတဲ့.. ဒါမလုပ်သင့်ဘူးလို့ကျွှန်တော်ထင်ပါတယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွှန်တော့်တို့လည်း တက္ကသိုလ်ရောက်လာပါပြီ.. state ကျောင်းသားမဟုတ်တော့ပါ..
ဒီမှာက တိုင်မယ့်သူမရှိရင် လွတ်လပ်ပါတယ်။
အဲတော့လွတ်လပ်ချင်ရင် အတိုင်အတောမထူကြပါနဲ့လို့ အကြံကောင်းလေးပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျောင်းတတ်ရတာ အရမ်းပင်ပန်းတယ် … အသွား ၁ နာရီကျော်ကျော်သွားရတယ် အပြန်တစ်နာရီကော်ပြန်ရတယ် … နေပူရင်လည်းတော်တော်ပူတယ် …ကားကလည်း ခုန်လိုက်တာမှ လူတောင်မြောက်မြောက်တတ်သွားတယ် …